teo tamin’iny faritra Arivonimamo iny. Tao amin’ny fokontany Miadamanjaka, kaominina Arivonimamo ny harivan’ny 16 aogositra tamin’ny 7 ora latsaka. Ny ben’ny tanàna no nampilaza ny zandary avy hatrany ny Borigadin’ny zandary ao Arivonimamo. Miisa
sivy ireo dahalo izay nandrahona ny fokonolona tamin’ny alalan’ny tora-bato sy ny fitondrana zava-maranitra. Manoloana ny hery tsy mitovy, tsy sahy niatrika ireo mponina teo amin’ny manodidina.
Vao naharay vaovao ny zandary dia nidina tany an-toerana ny 4 izay notarihin’ny lehiben’ny tobim-paritra Arivonimamo. Efa nampandrenesina avokoa ireo polisy sy zandary miasa amin’ny
manodidina mahakasika ity raharaha ity. Hatramin’ny nanoratana ny vaovao, tsy mbola nisy tratra ireo jiolahy, raha ny tafa manokana tamin’ny mpitandro filaminana ao Arivonimamo.